Raphaël Varane oo ku qancinaya Kylian Mbappé inuu ku biiro kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 19 Sebt 2019. Daafaca Real Madrid ee Raphaël Varane ayaa xaqiijiyay inuu isku dayi doono inuu ku qanciyo xiddiga Paris Saint – Germain ee Kylian Mbappé inuu ku biiro kooxda Los Blancos mustaqbalka dhow.
Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayay dhowr jeer oo horey inuu ku biirayo kooxda Real Madrid, gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay, halka Paris St Germain ay iska diiday inay fasaxdo adeegiisa, haddii aysan ku heli doonin qiimo lacageed ay ku fasaxi karto.
Raphaël Varane ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan marwalba doonayay in Mbappé uu qeyb ka noqdo kooxdeyda, ha ahaato xulka qaranka ama xitaa naadiga aan u ciyaarayo, waa ciyaaryahan aad u fiican”.
“Wuxuu xilli ciyaareedkan ku qaadan doonaa Paris, laakiin ma aqaano waxa dhici doona mustaqbalka”.
“Marka laga hadlayo Real Madrid, waxaan hayaa waxyaabo fiican oo aan u sheegi karo isaga, laakiin wax walba wuu ka war qabaa”.
Si kastaba ha noqotee, 20 jirkan weerarka kaga ciyaara kooxda Paris Saint – Germain kulankooda koowaad heerka group-yada ee tartanka Champions League ay xalay 3-0 kaga badiyeen Real Madrid.